PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: စိုင်းနော်ခမ်းရဲ့ လူ့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန် ဆုတောင်းပုံပါ...
စိုင်းနော်ခမ်းရဲ့ လူ့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန် ဆုတောင်းပုံပါ...
သူ့မိခင်နဲ့ သူ့ကလေးတွေ ဒီပုံတွေ မြင်ရင်ဘယ်လောက်များ ကြေကွဲကြ မလည်း???????
ပေါက်ဖေါ်ကြီးခင်ဗျား တူဖြစ်တုန်း ထုထားပါ....
ပေဖြစ်တဲ့အခါကြရင်လည်း မအော်နဲ့ပေါ့ဗျာ နော့.....
ထင်းခွေ မကြုံ ရေခပ်ကြုံမှာပါ ပေါက်ဖေါ်ကြီးရယ်....
စိုင်းနော်ခမ်းကို တရုတ် အစိုးရက ခွေးချီထိုင်ခုံမှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဆေးထိုးသတ်တာကို .. Media ကလွှင့်သလိုပဲ .. ငါတို့မြန်မာတွေကလည်း ... သူတို့ပြည်က တရုတ်တွေ ငါတို့နိုင်ငံမှာ လာပြီး
ပြစ်မှုကျူးလွန်ရင် ... အလောင်းမင်းတရားခေတ်ကလို .. လည်မျိုကို ဝါးရင်းတုတ်နဲ့ မသေမချင်း ငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းပြီး ရိုက်သတ်တာကို Media ကနေ စိမ်ပြေနပြေ လွှင့်ပြရမယ်။။။
ငါတို့မြန်မာတွေလည်း ဒီလိုသတ်တတ်တယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကို သိအောင်ပြရမယ်...။ ခေတ်မကောင်းလို့ ငြိမ်နေတာ မြန်မာတွေ သွေးကြောင်တဲ့ လူမျိုး မဟုတ်ဘူး ... ခွေးမသားးးးးးးးး စောက်တရုတ်တွေ ........... သိထားး ............................................................................................စိုင်းနော်ခမ်း ဆေးထိုးသေဒဏ် ပေးခံရတာကို ......
အရှင်းဆုံး အားမနာတမ်း ဝေဖန်ရရင်တော့ .. ကိုယ့်မြန်မာအစိုးရကိုယ်တိုင် ခေတ်အဆက်ဆက် .. စောက်သုံးတစ်စက်မှ မကျခဲ့ဘူး .. ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် အာမခံချက် ခိုင်မာမှုရှိတဲ့ .. လုံခြုံစိတ်ချရမယ့် ဥပဒေတွေ မရှိခဲ့ဘူး .. ရှိတယ်ဆိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့က လူကြီးတွေ စိတ်ဓါတ်ကိုက ဘယ်အချိန် အမြီးကျက်မလဲ .. ဘယ်အချိန် ခေါင်းကျက်မလဲ .. ဘယ်အချိန် ပရောဂျက်ကြီးကြီး လက်ထဲရောက်မလဲ .. ဒါပဲတွေးတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ လူကြီးတွေ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ခေတ်အဆက်ဆက် လာဘ်စားခဲ့လို့ တိုင်းပြည် ချွတ်ချုံကြရတယ်။ ဒီတော့ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာ မျက်နှာမွဲ မျက်နှာပြာနဲ့ အကြွေးပတ်လည် ဝိုင်းနေတဲ့ သနားစရာ နိုင်ငံလေးအဖြစ် ရပ်တည်နေရတယ်။ ဒီတော့ လိုသလောက် ပိုက်ဆံကို ထုတ်ချေးပေးနိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကို ဖင်မရတယ်။။။ မျက်နှာလုပ်ရတယ်။ စိတ်အကွက်မခံရဲဘူးးး။။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်နိုင်ငံသား ဘယ်လိုပဲ သူများနိုင်ငံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ပါစေ ... ယက်ထောကိစ္စမှာ ... အမေရိကန်နိုင်ငံ အစိုးရ သူ့လူသူ ပါအောင် ပြန်ခေါ်သွားတယ်။။။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန် ကျူးလွန် ... အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်နိုင်ငံသားကို သက်သာအောင် ... ကူညီပေးတယ်။..........................................................စိုင်းနော်ခမ်းရဲ့ လုပ်ရဲရင် ခံရဲတယ်ဆိုတဲ့
စိတ်ဓါတ်ကိုတော့ ကြိုက်တယ် ။။။ (ပြုံးနေတာဘဲ...မျက်နှာတစ်ချက် မပျက်ဘူး သွေးမကြောင်သွားဘူး)................................................. Kyaw Swar Myint
တရုတ်အစိုးရက သူ့ကို သေဒဏ် မပေးခင် (၂၈)ရက်နေ့မှာ ထောင်က
ထုတ်လာပြီး သတင်းသမားတွေ ရှေ့မှာ ပွဲထုတ် လူလုံးပြပြီး တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို ကြိုးနဲ့တုတ်ပြတာကတော့ လူမဆန်တဲ့ အပြုအမူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်တယ်။
လူသတ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်နေသည့်တိုင် လူသားတစ်ဦးအနေနဲ့
သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုတော့ လေးစားသင့်တယ်။
သူ့မိခင်နဲ့ သူ့ကလေးတွေ ဒီပုံတွေ မြင်ရင်ဘယ်လောက်များ ကြေကွဲကြ မလည်း။ ဒါကြောင့်လည်း သူ ကင်မရာ ရိုက်နေတဲ့ အချိန်တစ်လျှောက်လုံး ကြောက်ရွံ့ပုံ လုံးဝမပြဘဲ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ရင်ဆိုင်သွားခဲ့တာနေမှာပါ။]
သူသေဆုံးချိန်မှာ နော်ခမ်းဟာ အသက် ၄၃ နှစ်ရှိပါပြီ။.................................................ကိုသောင်း ပုလဲမြေ's photo.
ဦးသိန်းစိန် ကိုယ်စာ စိုင်းနော်ခမ်း ဒူးထောက်လိုက်ရတာပါ။ --------------------------------------------------------- တရားခံ စို်င်းနော်ခမ်းကို ဒူးထောက်ခိုင်းထားတာဟာ လူဂုဏ်သိက္ခာကို ချိုး နှိမ်တာပေါ့။ လူဂုဏ်သိက္ခာကိုလေးစားတဲ့နိင်ငံတွေမှာ ဒါမျိုးမရှိဘူး။တရုပ်နိင်ငံက ဆူပါပါဝါဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် ဆူပါပါဝါယျဉ်ကျေးမှုရှိဖို့ တော့လိုတယ်။ စိုင်းနော်ခမ်းကို သတ်ဖြတ်မှုမှာ နိင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးပါနေတယ်။ အရင်က သတ်ဖြတ်မှုတွေမှာဒီလောက်အသေးစိတ်မပြဘူး။ ဒီလောက်အသေးစိတ်ပြနေတာကတော့ အမျိုးသားထုတရပ်လုံးကိုစောကားမှု ( National Humiliation) ဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ပြည်က ဒီဒေသမှာ ငါဗိုလ်ပဲဆိုတာကို ပြလိုက်တာ။ အထူးသဖြင့် လာအို စ်နဲ့မြန်မာအစိုးရတွေကို သတိပေးလိုက်တာ။ ဦးသိန်းစိန် ဒူးထောက်လိုက်ရတာပါပဲ။ စိုင်းနော်ခမ်းကို သတ်ဖြတ်မှုက ငါဒို့လူတွေကိုထိရင် ဒီလိုအရေးယူမယ်ဆိုတာကိုပြတာပါ။ စိုင်းနော်ခမ်းကို ဒူးထောက်ခိုင်းတာ မင်းတို့ကြည့်ထားကြ။ တရုပ်အင်ပါယာကို စမ်းဝံသူတွေဟာဒီလိုဒူးထောက်ရမယ်ဆိုတာကို မြန်မာ နဲ့လားအို စ်ကို သခန်းစားပေးလုိုက်တာပါ။ တရုပ်ပြည်ကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့မူးယစ်ရာဇာ တွေဖြစ်တဲ့ လောစစ်ဟန်၊ လောစစ်မင်း၊ ခွန်ဆာ တို့ ကို ကြတော့ဒီလုိုအရေးမယူခဲ့ပါဘူး။ ဒီတခါတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရှမ်းအမျိုးသားတဦးဖြစ်တဲ့ စိုင်းနော်ခမ်းဟာ ကံဆိုးသူမောင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တရုပ်ပြည်က မြန်မာအစိုးရကို အမြက်သိုနေတဲ့ကာလ ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ အရင်က သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ တရားခံတွေကို ဒီလို ဒူးထောက်ရတာတွေမရှိဘူး။ ဘယ်နိင်ငံမှာမှ လဲ ဒီလိုသေဒဏ်ကျတဲ့တရားခံကို ထပ်ပြီး ဒူးထောက်ခိုင်းတာမရှိဘူး။ဒါဟာ ဦးသိန်းစိန် ကို်ယ်စား စိုင်နော်ခမ်း ဒူးထောက်လိုက်ရတာပါ။ မြန်မာ ပြည်မှာ ဒီမိုကရေတစ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုလက်ထက်မှာ တရုပ်ပြည်ဟာ မြန်မာ ကို ဒီလို မစောကားခဲ့ဘူး။ နောင် ဒီမိုကရေစီသမတ ကိုလဲ ဒီလိုမစောကား ၀ံပါဘူး။ ခံသူရှိလို့ လုပ်တဲ့သူကလုပ်ရဲတာပါ။ ဒီတော့ကျနော်တို့ လုပ်စရာရှိတာကတော့ တရုပ်ကြေးနီမိုင်းကို မြန်မာမြေပေါ်က နေမောင်းထုတ်ကြဖို့ ပါပဲ။ လက်ပတောင်းတောင် တိုက်ပွဲ ကို ဗဟိုပြုပြီး ကျန်တဲ့လူထုတိုက်ပွဲတွေဝိုင်ရံဖေါ်ထုတ်ဖို့ ပါပဲ။.................................................Ahman Tayar
အဲဒီခေတ် ကုန်ပါတော့မယ် . . မကြာခင် အဲဒီခေတ်ကုန်ပါပြီလို့ ပြောနိုင်မယ့် အချိန်ရောက်လာပါတော့မယ် . . ဗမာပြေထဲက တရုတ်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက်စီမံကိန်းတွေ ဖျာလိပ်ထားကြပါတော့လို့ ပြောပါရစေ .Black Angle